Falcon50 autopilot 3 afọ 5 ọnwa gara aga #138
Daalụ natara: 4
M ebudatara maka FSX nke 747 Airforce Otu ubochi ole na ole gara aga…
Na kokpiiti m chọpụtara na agụ nkwọ 50 autopilot modul, panel ma ọ bụ ihe mgbe aha bụ ...
My ajụjụ bụ:
Enwere m ike iji thisFalcon50 Autopilot maka ndị ọzọ ụgbọelu si na-na ihe m kwesịrị ime iji nweta a na m ọzọ ụgbọelu si na-arụ ọrụ, ọ dị onye maara ...... ?????
ahụ na-ekekọta ....
Falcon50 autopilot 3 afọ 5 ọnwa gara aga #139
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: Gh0stRider203, luis1245
Falcon50 autopilot 3 afọ 4 ọnwa gara aga #168
EE! Ị nwere ike. Emere m ya n'ihu Onwe m. ọ dị oge ma HOPEFLYLY this helps ...
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: FvS
Falcon50 autopilot 3 afọ 4 ọnwa gara aga #169
BTW nwute n'ihi bụghị aza mee elu mee. Ahụghị m gị post. My ọjọọ
Falcon50 autopilot 3 afọ 4 ọnwa gara aga #174
Thx a otutu maka zara, m ga na-agbalị ka ya ofu ....
Falcon50 autopilot 3 afọ 4 ọnwa gara aga #175
lemme mara na ọ bụrụ na isiokwu bụ mgbe niile na-enye aka. Dị ka m kwuru, na emewo m ya tupu ... ma ọ meela a MGBE akpa ọchị
Falcon50 autopilot 3 afọ 4 ọnwa gara aga #176
Gh0stRider203 dere, sị: Jisie!
M jisiri ike na Falcon50 Autopilot panel na ndị ọzọ ụgbọelu, ugbu a, m nwere ike ofufe na ụgbọelu na ihuenyo zuru na-eji Falcon50 Autopilot na a obere sub-ihuenyo ala na ala ... Lee image mmasị ..greetings si Netherlands .....
Ndumodu ikpe azu: site FvS.
Oge ike page: 0.375 sekọnd